Ofdị ugwu mgbawa: njirimara na mbido | Netwọk Mgbasa Ozi
E nwere ọtụtụ ụdị ugwu mgbawa na-adabere na mbido ha, morphology na ụdị mgbawa dị iche iche. Mgbapu na-adabere na oke na ọdịdị nke ugwu mgbawa yana oke dị n'etiti ụdị gas, mmiri mmiri na ihe siri ike nke ewepụtara n'ime. Typedị mgbawa ọ bụla nwere nsonaazụ dị iche iche maka mgbanwe nke gburugburu ebe obibi na ụmụ mmadụ.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe dị iche iche nke ntiwapụ bụ, njirimara ha bụ isi na nsonazụ ha nwere ike pụta.
1 Kedu ihe mgbawa ugwu ya
2 Ofdị na-agbawa agbawa
2.1 Ihe mgbawa nke Hawaii
2.2 Ngbawa Strombolian
2.3 Ihe mgbawa nke Vulcan
2.4 Ogbunigwe Plinian
2.5 Surtseyan gbawara
2.6 Mmiri Hydrovolcanic
Kedu ihe mgbawa ugwu ya
Mgbe anyị na-ekwu maka mgbawa ugwu, anyị na-ekwu maka ihe niile si n’elu ugwu na-agbọpụta pụta. A ugwu mgbawa mejupụtara magma ụlọ ebe lava na ihe niile na-ekpo ọkụ ihe na-agbakọba. Ihe ndị a sitere na uwe elu ụwa, n'aka nke ya, site na isi ụwa. Dabere na morphology nke ụlọ magma, ụfọdụ ihe na-agbakọta nke ga-emecha hapụ otu ma ọ bụ gas ndị ọzọ. Ime ụlọ a dị n’ime ime ala.
Ebe ugwu ugwu mgbawa mere bụ site na ọnụnọ. Mgbawa nke ugwu mgbawa bụ oghere nke akụkụ kachasị elu ma ọ na-adịkarị ka olulu. A na-etinye ihe na lava nke a na-echekwa n'ime ụlọ magma n'ime ndagwurugwu ahụ site na mmiri a na-akpọ chimni.
Ya mere, anyị nwere ike ikwu na ugwu mgbawa bụ nchụpụ nke ihe ndị a niile gbakọtara n'ụlọ ime anwansi ka oge na-aga. E nwere ụdị mgbawa dị iche iche na-adabere na morphology nke ugwu mgbawa na ihe a gbakọtara na gas. Ọrụ nke ugwu mgbawa siri ike ịkọ. Enwere ọtụtụ ihe bụ ihe na-ekpebi ihe mgbawa ugwu. Nọmalị ugwu ọkụ niile nwere oge anaghị arụ ọrụ.
Fọdụ na-anọgide na-adịgide adịgide na-arụ ọrụ dị oke oke na-ebelata mmetụta ndị na-adịghị mma ma na gburugburu ogbe ndị mmadụ na ihe egwu mmadụ. Ugwu mgbawa ndị a na-adịghị arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ narị afọ ma na-agbapụta na mgbawa ugwu ndị ka njọ bụ ndị nwere ike iweta ihe egwu kachasị na ndị bi na obodo ndị gbara ugwu mgbawa ahụ.
Anyị ga-ahụ ihe bụ ụdị ntiwapụ ndị na-adabere na gas, mmiri mmiri na ihe siri ike ha na-enye, yana ọdịdị na nha nke ugwu mgbawa.
Ihe mgbawa nke Hawaii
Ihe ndi mmadu a nwere dika ihe kachasi nma ha bu ihe ndi mejuputara. Nke a bụ n'ihi ọkachasị lava bụ nke ugwu dị elu. Ugwu ndị a na-ahụkarị n'àgwàetiti ndị dị n'oké osimiri dị ka agwaetiti Hawaii. Mgbawa ndị Hawaii nwere oke mmiri na-amịpụta ikuku na ikuku. Nke a anaghị eme ka ha bụrụ ihe egwu ma ọ bụ ihe mgbawa.
Ka a wee nwee ike ịhụ ụdị ugwu Hawaii na-agbọpụta, ugwu mgbawa aghaghị inwe ọdịdị ọta na mkpọda ugwu dị ala. Ọnụego nrịgo nke magma si na ime ụlọ magma dị ngwa ngwa, ma na-agba ọsọ na-ebili oge.
Ihe ize ndụ nke ugwu mgbawa ndị a bụ n'eziokwu na lava, ịbụ oke mmiri mmiri, nwere ike ịga njem ihe ruru kilomita. N’okporo ụzọ ọ na-aga, ha nwere ike ịkpalite ọkụ na ibibi akụrụngwa ọ gafere.
Ihe ndi a nwere magma nke ihe mejuputara ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọdịdị ya bụ basaltic ma nwee ntu oyi nke nwere nnukwu mmiri. N'adịghị ka mgbawa mbụ, magma na-eji nwayọ nwayọ ma na-agwakọta ya na ikuku gas ndị ọzọ nwere ike ịrị elu ruo mita 10 n'ịdị elu. N’adịghị ka mgbawa ndị Hawaii, mgbawa ndị a na-egosi ihe mgbawa oge ụfọdụ.
Ọ bụ ezie na ha anaghị emepụta ogidi ndị na-ebugharị ya, pyroclasts ahụ na-agbapụta na-akọwa ụzọ dị iche iche nke ballistic wee mechaa kesaa ya gburugburu gburugburu kilomita ole na ole na ndagwurugwu ahụ. Ihe mgbawa ndị a abụghị ime ihe ike, ya mere ha adịchaghị ize ndụ. Ha nwere ike ịmị cones.
Ihe mgbawa nke Vulcan
Anyị na-aga n'ihu na otu n'ime ụdị mgbawa ndị na-enwekarị ihe mgbawa. Mgbawa nke ihe mgbawa a na-eme mgbe ekpughere ugwu mgbawa nke oyi na-egbochi. Ihe mgbawa ahụ na-eme n'oge etiti nkeji ole na ole ruo awa. Ha na-ahụkarị na ugwu mgbapụta magma-nke dị n'etiti ihe dị n'etiti acidic na isi.
Ogidi ndị ahụ akarịghị kilomita iri n'ịdị elu ma na-ewere ugwu ndị ahụ dị ka obere ihe egwu.
Ọ bụ otu n’ime ụdị gas na-agbapụta mmanụ gas. Igwe ndị a na-agbaze na magma ma na-eme ka ọ na-ekewa ya na pyroclasts dị iche iche. Ejiri pumice na ash mee Pyroclasts. Na ngwakọta ngwaahịa a niile agbakwunyere ọsọ ọsọ nke ịrịgo site na anwụrụ ọkụ na mgbawa na-esochi. Ihe na-agbawa agbawa na-adịkarị jụụ ma na olu na ọsọ. Magmas na-abụkarị viscosity dị elu na siliceous na ihe mejupụtara.
Ihe ize ndụ ha dị elu nke ukwuu ebe ọ bụ na ogidi ndị na-agbapụta agbapụta yiri nke ero ma mee ka ha rute n'ebe dị elu nke ruru stratosphere. Ọ bụ ebe a ka mmiri ozuzo ntụ dị egwu na-eme, na-emetụta okirikiri nke ọtụtụ puku kilomita kilomita.
Ha bụ ihe mgbawa kachasị mma nke magma na-ejikọta na oke mmiri. Ihe mgbawa ahụ na-aga n'ihu yana n'ihi kọntaktị nke lava nwere na mmiri mmiri, a na-emepụta nnukwu igwe ojii nke alụlụụ mmiri nwere agba ọcha agwakọtara ya na ojii ojii nke sitere na basaltic pyroclasts.
Ha bụ ụdị ndị na-agbapụta na mmiri nke mmiri na-abanye na ya. A na-agwakọta Lava na mmiri nke oyi akwa ahụ ma na-ebute ịrị elu nke magma site na anwụrụ ọkụ. Ihe mgbawa ahụ dị obere A ma mepụta ya na nkume dị elu site na isi iyi ọkụ magma. Ha na-ewepụtakarị na nsị ndị ọzọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, dabere n'ụdị ugwu mgbawa, nha na ọdịdị enwere ụdị ugwu mgbawa dị iche iche. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ofdị na-agbawa agbawa